Yaa leh Qorshaha Taleefoonka Gacanta ee Lacag-bixinta ugu Fiican Sanadka 2022 | Dib u eegista Isticmaalayaasha
Bogga ugu weyn Yaa leh Qorshaha Telefoonka Gacanta ee Lacag-bixinta ugu Fiican Sanadka 2022 | Dib u eegista Isticmaalayaasha
Yaa leh Qorshaha Telefoonka Gacanta ee Lacag-bixinta ugu Fiican Sanadka 2022 | Dib u eegista Isticmaalayaasha
Waqti yar ka hor, waxaan ka dhergay qorshihii taleefanka gacanta ee hore loo isticmaali jiray taas oo ay ugu wacnayd xaqiiqda ah inaan lacag badan ku bixiyo adeegyo yar ama ka yar beddelkeeda.
Waa kan warka wanaagsan, waxaan helay qorshayaasha taleefanka gacanta ee ugu-fiican ee loogu talagalay isticmaaleyaasha.
Qorshayaasha taleefanka ee la sii diyaariyey waxay hoos u dhigaan kharashyada taleefankaaga casriga ah adiga oo bil kasta bixiya biilka taleefanka gacanta ee hoose. Si ka duwan qorshayaasha xogta ugu fiican ee aan xadidnayn ama qorshayaasha xogta isku xidhan ee ka yimid magac-weynaha magac-weynta leh, qorshayaashu ma kharash gareeyaan wax ka badan $ 50 bishii. Xitaa xogta aan xadidnayn lama gaadhi karo maalmahan haddii aad u jeesato sidaha hore loo sii qaaday.
Maqaalkan, waxaan si isxilqaan leh ula wadaagi doonaa qorshayaasha taleefanka ee ugu-habboon ee adeegsadayaasha. Waxay ku saabsan tahay waqtigii aad qarash garayn lahayd oo aad lahaan lahayd wax badan oo la isticmaalo iyo maalgelinta. Ila joog!
Qorshaha Taleefanka Gacanta ee Hore Loogu Sameeyay Ma Ahaa Fikrad Wanaagsan?
Qorshayaasha taleefanka ee ugu fiican ayaa kaa caawin kara inaad yarayso kharashaadkaaga casriga ah adigoo bil walba bixinaya biilka taleefanka gacanta ee hoose. Si ka duwan qorshayaasha xogta ugu-xad-dhaafka ah ama qorshayaasha xog-is-weydaarsiga ee magac-weyn-sidayaasha bilaa-waayirka ah, qorshayaashu inta badan ma kharash gareeyaan wax ka badan $ 50 bishii.
Joojinta adeegga billaha ah ee dib -u -bixinta waxay kaa badbaadin kartaa boqolaal sanadle ah maadaama ay qiimo weyn ku leedahay booska hore loo sii -diyaarshay, gaar ahaan haddii aad hadda ku jirto qorshe dib -u -bixinta mid ka mid ah kuwa sida weyn u sidda.
Suuqa horay loo sii diyaariyey ayaa kor u sii kacaya iyada oo adeegsadayaasha badankoodu ay u beddelaan qorshayaal aan qandaraas lahayn bil kasta. Taas micnaheedu waa farqiga ugu weyn ee u dhexeeya qorshayaashaada dib -u -bixinta lacag -bixinta (oo leh jeegga deynta) ayaa ah in dib -u -bixinta aad bixiso dhammaadka muddada biilka billaha ah, iyo lacag -bixinta, waxaad bixinaysaa bilowga. Faa'iidooyinka xulashada qorshaha taleefanka gacanta ee la sii shubay waxaa ka mid ah:
Jeeg deyn ma leh: Ha ka werwerin haddii aad leedahay dhibco dhibco dhibco ah, waxaad weli u -qalmi doontaa qorshaha taleefanka ee la sii diyaariyey.
Fahmidda: Haddii aad rabto inaad joojiso ama joojiso qorshaha taleefanka gacanta, si fudud ayaad u bixi kartaa.
Ma jiro heshiisyo: Ma jiraan qandaraasyo kugu xiraya qorshe waqti cayiman.
Qoysaska waa la soo dhaweynayaa: Qorshayaasha lacag -bixinta ah hadda waxay taageeraan khadad badan oo ku jira koonto keliya taas oo kaa badbaadin karta lacag badan.
Sidee U Shaqeeyaa Qorshaha Taleefanka Gacanta?
Telefoonnada gacanta ee la sii shubay, haddii kale loo yaqaan bixi sida aad u socoto taleefoonnada ama taleefannada aan heshiiska lahayn, waxaad horay u bixinaysaa qaddar gaar ah oo ah adeegsiga xogta/daqiiqado. Markaad ku dhufato xadka aad bixisay, adeeggaagu wuu dhammaanayaa ilaa aad doorato inaad wax badan iibsato.
Farqiga weyn ayaa ah in taleefannada horay loo sii bixiyay, bixinta adeegga la bixiyo kahor isticmaalka. Sida wicitaannada iyo qoraallada la sameeyo, iyo sida xogta loo adeegsado, jar -jaryada waxaa laga sameeyaa qaddarka dheelitirka ee la sii diyaariyey ilaa lacag la waayo (waqtigaas oo adeegyadu joojiyaan shaqadooda). Isticmaalaha ayaa laga yaabaa inuu ka fogaado carqaladeynta adeegga isagoo bixinaya lacago si loo kordhiyo dheelitirka hadhay.
Haddii aad u baahan tahay xog aan xad lahayn, hadal, iyo qorshayaasha taleefanka gacanta ee qoraalka ah, ama qorshe taleefan oo horay loo sii diyaariyey qalab caqli badan, waxaad ka heli kartaa ikhtiyaar raqiis ah oo dejiya baahida. Waxa kaliya oo aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad hesho qorshaha taleefanka ee saxda ah.
Sida Loo Doorto Qorshaha Taleefanka Lacag -bixinta Ugu Fiican
Markaad dooranayso qorshaha taleefanka ee ugu fiican, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso caymiska, qiimaha iyo astaamaha.
Sababtoo ah qorshayaasha horay loo bixin inta badan ma la yimaadaan nooca faa'iidooyinka qorshooyinka taleefanka gacanta ee la bixiyo, marka waxaa la filayaa in lagu bixiyo qiimo jaban.
Inta aan dhihi karno qorshuhu wuxuu leeyahay astaamo la yaab leh, waxay macno weyn ugu yeelan kartaa isticmaale-hayaha haddii aadan ka helin caymis shabakadda sidaha meesha aad uga baahan tahay. Markaad hubinayso khariidadda caymiska ee sidaha, waa in xoogga la saaraa meelaha aad wakhtigaaga badan ku qaadato, sida gurigaaga iyo/ama xafiiskaaga.
Intaa waxaa dheer, Haddii aad raadineyso inaad lacag ku keydiso lacag-bixin, waxaad aad u qurux badan tahay inaad hesho aasaaska-hadal iyo qoraal aan xad lahayn, iyo xoogaa xog xawaare buuxa ah. Aqoonta inta xog ah ee aad caadiyan isticmaasho bishii ayaa si weyn kaaga caawin doonta sidii aad ku heli lahayd qorshaha kuugu-diyaargarowga ugu fiican.
Mar labaad, maadaama aad hore u sii bixinayso waxaad arkaysaa inta ay tahay inaad bixiso oo aad taas ku bixiso. Majiraan khidmado dheeraad ah, kor u kaca qiimaha la yaabka leh, ama xad -dhaafka. Hubaashii waxay kuu saamaxaysaa inaad si ka sii fiican wax u qabato Miisaaniyadda. (Fiiri barnaamijyada miisaaniyadda ugu fiican in la isticmaalo).
Sida ay jiraan sababo badan oo loo tixgeliyo qorshaha taleefanka ee la sii diyaariyey - mid ka mid ah ayaa ah inay kaa tagto wax kugu filan ka kaydi jeegaaga mushaharka, waxaa jira xulashooyin badan oo laga dooran karo. Eeg qorshaha taleefanka gacanta ee la heli karo ee ugu fiican.
Yaa Leh Qorshaha Taleefanka Gacanta Ugu Horeeya Oo La Bixiyay
Si loo go'aamiyo qorshayaasha ugu fiican, Wareegga Maalka eegay qiimaha qorshaha billaha ah kahor canshuurta iyo khidmadaha; qoondaynta xogta xawaaraha sare leh; marka lagu dabaqi karo, qiimaha halkii gigabyte; iyo astaamaha sida muusigga aan xadidnayn iyo qulqulka fiidiyaha.
Qorshayaasha taleefanka gacanta ee horay loo bixiyay ayaa ku siinaya ikhtiyaarka aad wax badan ku kaydsan karto. Eeg siyaabaha ugu sarreeya ee lagu badbaadiyo lacag miisaaniyad ciriiri ah.
Halkaan waxaa ah liiska qorshayaasha taleefanka gacanta ee ugu fiican.
#7 AT&T 8GB Qorshaha Xogta
Magaca Qorshaha: AT&T 8GB Qorshaha Xogta Qiimaha Bishii: $ 40 Qaddarka Xogta: 8GB Tilmaamo gaar ah: Waxaa ku jira $ 10 dhimis otomaatig ah, xogta duubista, qulqulka fiidiyaha HD
Si ka duwan qaar ka mid ah qorshayaasha kale ee hore loo sii bixiyay, gunnooyinka caruusadaha AT&T ee isticmaaleyaasheeda. Halkan, waxaad ku wareejin kartaa xogta aan la adeegsan bisha xigta, waadna kari kartaa qulquli fiidiyaha ee xallinta HD. .
Marka lagu daro qorshayaasha maalinlaha ah, ee ku kacaya $ 2 maalintii, AT & T sidoo kale waxay leedahay qorshayaal xog aan xad lahayn oo loogu talagalay isticmaaleyaasha horay loo sii diyaariyey, iyada oo marmar qiimo dhimis laga dhigaayo qorshayaashaas kuwo afka laga daawado.
ARAG SIDOO KALE: Sida lacag looga helo kaydinta 2021 | Talo Run ah
#6 Qorshaha Taleefanka Lacag -bixinta ee Mint Mobile
Magaca Qorshaha: Mint 8GB qorshe Qiimaha Bishii: $ 20 Qaddarka Xogta: 8GB Tilmaamo gaar ah: Muuqaalka hotspot -ka moobiilka; Heerarka dhimista ee adeegga sannadlaha ah
Mint Mobile waxay bixisaa caymis qaran oo dhan iyadoo la adeegsanayo shabakadda T-Mobile oo leh qiime aad u hooseeya oo aad u hooseeya xog badan. Markaad iska diiwaangeliso qorshaha ugu caansan ee Mint waxaad helaysaa 8GB xogta LTE oo lagu daray limhadal la'aan oo ku qor kaliya $ 20 bishii saddexda bilood ee ugu horreeya ee adeegga.
Haddii aad bil-bil u raacdo adeegga, sicirkaagu wuxuu kordhaa $ 35 bishii. Haddii aad rabto in qiimahaas $ 20 uu sii joogo, waa inaad iska qortaa hal sano oo adeeg ah. Waxa kale oo aad iska diiwaangelin kartaa lix bilood qiimo dhimis la dhimay, oo waxaa jira 3GB, 12GB ikhtiyaar, iyo xulashooyinka xogta aan xadidneyn ee Mint, sidoo kale
On Mint Mobile waxaad ku jiri doontaa shabakadda T-Mobile. Taas macnaheedu waa inaad lahaan doonto caymiska 4G qiyaastii 62% dalka.
Ballan-qaadka adeeg sannadka ah oo ka tanaasulaya qaar ka mid ah dabacsanaanta adeegga horay loo sii-beddelay si loogu beddelo biilka taleefanka gacanta ee billaha ah ee hooseeya, laakiin taasi waa is-weydaarsiga dadka qaar ku farxi doonaan inay sameeyaan-gaar ahaan maaddaama qiimaha hore ee Mint uu ka hooseeyo iibsiga la midka ah- qiimaynta hore ee AT&T.
Tan, Mint Mobile waxay u socotaa qorshayaasha taleefanka gacanta ee ugu fiican oo aan xad lahayn.
#5 Kor u qaad Qorshaha Mobilka aan Xadidnayn
Magaca Qorshaha: Labanlaab Qorshaha Xogtaada Qiimaha Bishii: $ 10 Qaddarka Xogta: 2GB Tilmaamo gaar ah: Goobta mobilada ee aan xadidnayn
Boost wuxuu raadinayaa inuu garaaco qorshaha T-Mobile Connect isagoo bixinaya isla 2GB ee xogta LTE laakiin $ 10 bishii. Taasi waa $ 5 wax ka yar waxa T-Mobile ku dallaco qorshaheeda. Kordhinta xogtaada 4GB waxay ku kici doontaa $ 15.
Soo jiidashada ayaa ah in iyadoo qorshaha T-Mobile uu yahay mid joogto ah sida qorshayaasha taleefanka gacanta ay u helaan, Boost wuxuu socodsiinayaa oo keliya tan iyo Diseembar 31, 2020.
Haddii aad jeceshahay xogta hotspot -ka oo ha ka fikirin inaad midowdo qulqulka muusikada oo ay tahay inaad aragto ciyaaro soo baxaya, Qorshaha aan xadidnayn ee Boost waa go-yool. Waxaad sidoo kale aadi kartaa qorshaha Shrink-it oo ka bilowda $ 45 bishiiba 15GB ee xogta, laakiin ku daadisa $ 5 calaamadaha 3- iyo 6-bilood. Boost waxay kaa caawineysaa inaad yareyso biilkaaga billaha ah ilaa $ 35.
#4 Qorshaha Taleefanka Lacag -bixinta Lacag -La'aanta ee Jamhuuriyadda
Magaca Qorshaha: Qorshaha Wireless ee Jamhuuriyadda Qiimaha Bishii: $ 25 Qaddarka Xogta: 2GB Tilmaamo gaar ah: Sicir -dhimis dheeraad ah haddii aad sannad walba bixiso
Jamhuuriyadda Wireless oo ah mid ka mid ah qorshayaasha taleefanka hore ee ugu wanaagsan ayaa bixiya beddelka ugu wanaagsan ee qorshayaasha xogta sare leh ee bararsan ee summaddu ku habboon tahay. Waxaad ku bixinaysaa $ 15 oo keliya hadalka iyo qoraalka bil kasta Jamhuuriyadda. Xog kasta oo aad isticmaasho waxay ku kacaysaa $ 5 halkii gigabyte. Taas micnaheedu waa haddii aad xogtaada u isticmaasho wax ka yar 3GB, biilkaaga bil kasta kama sarrayn doono $ 30.
Jamhuuriyaddu waxay leedahay habab lagu yareeyo isticmaalkaaga gacanta. Ka sokow munaaradaha gacanta ee Sprint ee daboolkeeda LTE, Jamhuurigu wuxuu kaloo adeegsadaa meelaha Wi-Fi-ga ah si uu kaaga ilaaliyo ka-hortagga qarashka xogta culus. Haddii aad dalbato xog aan xad lahayn ama aad doorbidayso iPhones, waxaad u baahan doontaa inaad meel kale eegto - Jamhuuriyaddu waxay kaliya taageertaa taleefannada Android. Laakiin qof kasta oo aan si joogto ah ugu soo boodin khadka tooska ah si uu u sii qulqulo, u soo diro, ama u geliyo faylasha, wuxuu ka heli doonaa habka Jamhuuriya ee xogta inay ka nasato jeebka.
#3 T-Mobile Qorshaha Taleefanka Hore
Magaca Qorshaha: Qorshaha Xiriirka T-Mobile Qiimaha Bishii: $ 15 Qaddarka Xogta: 2GB Tilmaamo gaar ah: Qorshayaashu waxay koraan 500MB sanad walba
Wali lama hubo in isku-darka T-Mobile-Sprint uu saamayn ku yeelan doono qorshayaasha taleefanka gacanta, laakiin muddada-gaaban ugu yaraan, qiimaheeda la soo bandhigay ee qorshayaasha horay loo sii diyaariyey ayaa ugu sarreeya. Qorshaha Iskuxirka T-Mobile wuxuu ku siinayaa 2GB oo data bil walba kaliya $ 15. Haddii taasi cadeyso xog aad u yar, waxaad dooran kartaa 5GB, $ 25 qorshe bille ah.
Waxaad jeclaan doontaa inaad akhrido:
10 Siyaabood Oo Lacag Loogu Siin Karo Furitaanka Telefoonkaaga
Waxaa jira hal qabasho oo weyn halkan, waana inaad kaliya 2GB oo xog ah ku hesho qorshahaaga. Markaad intaas kor u qaaddo, waxaad ka baxday xogtii ilaa wareegga biilka ee xiga. Taasi kuma badna qorshayaasha horay loo sii bixiyay, in kasta oo sidayaasha qaarkood si fudud u yareeyaan xogtaada markaad ka gudubto qoondayntaada.
T-Mobile wuxuu ku siinayaa dhiirigelin ah inaadan aadin xamaaliyeyaasha kale, in kastoo. Sannad kasta oo aad ku dhegto T-Mobile Connect, waxaad heli doontaa 500MB oo xog ah oo lagu daray qaybtaada muddo shan sano ah. Markaa taasi waa suurtagal 2.5GB xog kale waqti ka dib.
#2 Metro By Qorshaha Telefoonka Hore ee T-Mobile
Magaca Qorshaha: Metro by T-Mobile 10GB Plan Prepaid Plan Qiimaha Bishii: $ 40 Qaddarka Xogta: 10GB Tilmaamo gaar ah: Ka daadi muusigga barnaamijyada 40-plus ah adiga oo aan isticmaalin xog
Maqnaanshaha qorshayaasha baaxadda leh ee Verizon, doorashada ugu fiican ee qorshayaasha hore ayaa ah Metro-ka T-Mobile. Taasi waa adeeggii T-Mobile lahaa oo loo yaqaannay MetroPCS, kaas oo ka faa'iideysta shabakadda degdegga ah ee shirkadda waalidkeeda.
Sidaha hore ayaa laga yaabaa inay xooga saarto qorshayaasha xogta aan xadidnayn maalmahan-waxbadan oo ka hooseeya kan hoose-laakiin qorshihiisa xogta ee $ 40-bishii ah ayaa weli ah heshiis wanaagsan oo loogu talagalay shaqsiyaadka, isagoo bixinaya 10GB oo xog xawaare sare leh. (Nasiib darrose, ma jiraan xog kulul oo ku jirta qorshahan.) Waxaad ka tanaasuli doontaa xoogaa faa iidooyin ah oo aad ka heli lahayd qorshayaasha aan qiimaha lahayn ee Metro, laakiin qiimaha $ 40-bishii ah waxaa ku jira canshuuro iyo khidmado, waxaadna isticmaali kartaa 40 muusig oo kala duwan adeegyada qulqulka adigoon ku dhejin barkadda xogtaada.
#1 Qorshaha Telefoonka Hore ee Verizon
Magaca Qorshaha: Qorshaha Hore ee Verizon 15GB Qiimaha Bishii: $ 45 Qaddarka Xogta: 15GB Tilmaamo gaar ah: Qiimo -dhimisyada ku -dheggenaanta qorshaha 3 iyo 9 bilood
Qorshayaasha hore ee Verizon waxay bixiyaan xog aad u tiro badan, oo uu hoggaaminayo ikhtiyaarka xamuulka ee 15GB. Taasi waxay kugu kici doontaa $ 45 bishii (ka dib markaad iska qorto otomaatiga qiima dhimis $ 5 ah), markaa waxaad bixinaysaa kaliya $ 5 ka badan Metro By T-Mobile $ 40 qorshe bille ah oo ah shan gigabytes oo xog ah.
Qiima dhimistu kuma dhammaato otomaatiga. Haddii aad ku dhegto qorshahaaga Verizon muddo saddex bilood ah, xamuuluhu wuxuu kaa qaadaa $ 5 kale sicirkaaga billaha ah, waxaadna heli doontaa $ 5 dhimis dheeraad ah sagaal bilood kadib. Taas macnaheedu waa, waxaad bixinaysaa $ 35 bishii 15GB ee xogta, taasi waa weyn tahay, sax?
Qiima dhimistu waxay khusaysaa ikhtiyaarrada kale ee hore ee Verizon-$ 60-bishii qorshe aan xadidnayn iyo $ 35-bishiiba 5GB.
Adeegga Verizon wuxuu ku yaallaa liiska jawaabta su’aasha ah, ‘yaa leh qorshaha taleefanka gacanta ee ugu habboon’ maxaa yeelay waxaad ka faa'iideysanaysaa shabakadda ballaadhan ee LTE ee side, oo kaalinta koowaad gashay tomsguide.com wareega ugu dambeeya ee imtixaanka ee shabakadda wireless -ka ugu dhakhsaha badan. Haddii aadan u baahnayn 15GB oo xog ah, waxaad sidoo kale ka faa'iidaysan kartaa qorshayaasha taleefanka ee hore loo sii diyaariyey oo qiimahoodu ka hooseeyo liiska, laakiin way adag tahay in la helo qorshe hore loo sii diyaariyey oo ka fiican kan Verizon bixiyo.
Qorshayaashan taleefan ee ugu-fiican ayaa hoos u dhigaya kharashyada taleefankaaga casriga ah iyagoo bil walba bixiya biilka taleefanka gacanta ee hoose. Haddii aad u baahan tahay xog aan xadidnayn, hadal iyo qoraal taleefan casri ah, qorshe taleefan iska rogaya oo fudud, ama mushahar caadiyan ah marka aad qorsheynayso aalad caqli-gal ah waa guul-wadaaga markaad hesho inaad jarto kharashka iyo sidoo kale kaydso lacag badan taas waa loo isticmaali karaa guri iibso or maal.
dib u eegista.org - Qorshayaasha Taleefoonka Gacanta ee Ugu Fiican
whistleout.com - Qorshayaasha Taleefoonka Gacanta ee Ugu Fiican
nerdwallet.com - Qorshayaasha Taleefoonka Gacanta ee Ugu Fiican
tomsguide.com - Qorshayaasha Taleefanka Lacag -bixinta ugu Fiican
wikipedia.org -Teleefannada gacanta ee la sii diyaariyay
Niyad -jab weyn Vs Hoos -u -dhac weyn: Qeexid, Kala duwanaansho, Cawaaqib
Niyad-jab weyn Vs hoos u dhac weyn, farqi ma jiraa? Oh haa! waxaa jira farqi weyn oo u dhexeeya labada…
Sida loogu iibsado Litecoin kaarka amaahda 2022 | Tilmaan Fudud
Litecoin waa mid ka mid ah lacagaha ugu caansan ee loo yaqaan 'cryptocurrencies adduunka oo dhan waxaana xitaa tixraaca qaar ka mid ah…
Buugaagta ganacsigu waa kuwo gaar u ah qof kasta oo raadinaya inuu sameeyo wax kasta oo sax ah laga bilaabo bilawga blog (haddii ay sidaas tahay, waxaad…
Qofka qaata shaqada maareynta ganacsiga waa maamule ganacsi. Iyo maamule ganacsi ahaan, waxay…